om0.com ဆိုတာ Virus လား ? — MYSTERY ZILLION
om0.com ဆိုတာ Virus လား ?
May 2009 edited January 2010 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော် PC ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်လောက်မှာ Virus ကိုက်ခံရတယ်လို့ သံသယရှိလာတယ်။PC က ခဏခဏ Hang တယ်ပြီးတော့ သူ့အလိုလို Restart ကျတယ်၊ ကျွန်တော် သတိထားမိချိန်မှာKaspersky7က Online update ရော Offline update အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တယ်။မရတာနဲ့ Virus Scan လုပ်ဖို့လိုလာပြီထင်လို့ စစ်ကြည့်လိုက်တော့ Virus တော့ မတွေ့ဘူး။Restart ကျသွားတယ်ပြီးတော့ PC စတက်တက်ချင်းမှာ ဒီလိုပေါ်လာတယ်။
ပြီးတော့ Drive တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်ရင် ဒီလို Alert ပြတယ်။
Terminate လုပ်လိုက်ရင် Skip လုပ်မလား Rollback လုပ်မလား လာမေးတယ်။ Delete လုပ်လို့မရဘူး။
ဒါပေမယ့် C: Drive အောက်မှာတော့ om0.com File ကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ Folder Option မှာလည်း Show Hidden File ကိုပြောင်းလိုက်ရင် သူ့အလိုလို Do not show Hidden File ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ CMD (Dos) နဲ့တော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုး
Attrib -a -h -s ဆိုပြီး Command ရိုက်လိုက်ရင် C: Drive အောက်မှာ Autorun.inf နဲ့ om0.com file တွေပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ Shift Delete လုပ်လိုက်ရင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် Window တက်ရင်တော့ Explore.exe လည်း Inject လုပ်ခံရပြန်တယ်၊ပြီးတော့ Autorun.inf နဲ့ om0.com file တွေလည်း Drive တစ်ခုဖွင့်တိုင်းပြန်တက်နေတယ်။ အောက်မှာတော့ Attach File မှာ Autorun.inf နဲ့ om0.com file နဲ့ ကျွန်တော့် Explore.exe File တွေကို Attach လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ ပြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးကျပါဦး။
Virus အရင်စစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Safe Mode with Networking ကဝင်ပြီး Update လုပ်ရင်ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။
မရရင်တော့ AVG နဲ့ MalwareByte ကို install ပြီး offline update လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Scan ကိုတော့ Safe Mode ကစစ်ကြည့်ပါ။
Malwarebyte's ကိုတော့ ကျနော် upload လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Offline update file ပါ။
AVG offline update file ကတော့ ဒီကဆွဲပါ။ Size ကြီးလို့ကျနော်ပြန်တင်ပေးမထားတော့ဘူး။
အရင်တုန်းက ဟာ ကိုပြန်ရှာပေးလိုက်တယ်နော် အစဉ်မပြေလဲပြောပေါ့....... explorer.exe ဆိုလို့..... မရရင်ပြန်ပြောပါ ဗျာ သများတွေဖြပေးပါလမ့်မယ်...:D:D:D
အခုလိုဖြေပေးကျတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်ပါတယ် ဗျာ
.exe virus ကအရမ်းပွားလာပြီဆိုရင်တော့...အနော်က kas7 use တာပါ....scan လုပ်ပြီးရင်တော့..window ..ပြန်တတ်ချင်မှတတ်လိမ့်မယ်နော်....အဲတတ်၇င်လဲ....window login ၀င်မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗျာ။။။။မှားတာပါရင်လဲ....ပြောကြပါ...